विधा Archives - Harekpal
योद्धाको नियति र विषकन्याको मन्द मुस्कान
कुनै अपराध गर्दागर्दै अपराध गर्नेको र देख्नेको आँखा जुधे के हुन्छ ! ऊ शारीरिक रूपमा कैद नभए पनि आँखामा कैद भैसकेको हुन्छ उसलाई जीवनभर कमजोर र ग्लानि बनाउने त्यो आँखा कति शक्तिशाली ! तीन–चार महिनाको बच्चा बोल्दैन तर आँखाको भाषा बुझेर उसैसँग रमाउँछन् मातापिता बच्चा पनि मातापिताको आँखा पढेर हात–खुट्टा फ्याँकेर मुस्कुराउँछ आँखा आँखाको प्रेम […]
‘जा नउवा । गाउँमा घर–घर भनेर आ कि जमिन्दारसाहेब बितिहाले ।’ जमिन्दारी रबाफले भन्यो, जमिन्दारको छोरा ढोलवाले । ‘अच्छा !’ नाई त्यहाँबाट हिँड्यो अनि गाउँको एकछेउमा पुग्यो अनि त्यहीँबाट घरघरै भन्नथाल्यो– ‘भूरे जमिन्दार बिते । भूरे जमिन्दार बिते !!….’ नाईले आफ्नो नोकरीका कारण जिम्मेवारी पूरा गर्यो । भूरे जमिन्दारको मृत्युको खबर सुनेर कसैकसैले भने– ‘हरे […]
मलाई एउटा इमानसँग सम्झौता गर्न मन लागेको छ जसले कहिल्यै पनि बेइमानी नगरोस् आफैँसँग पहिले योद्धाको देशमा काँतरहरूको प्रवेश निषेध गरौँ लुकेर मार हान्ने काँतर हुन् कसैलाई, कुनै काँतरलाई कृत्रिमताका साथ योद्धा बनाएर युद्धमा पठाउँदाको परिणाम तपाईँ आफैँ भोग्नुस् दुर्भाग्य, त्यो परिणामको उपभोक्ता तपाईँमात्र हुनुभएन हामी सबै भयौँ विनाकारण, योद्धा भएकाले काँतरको निशानामा प¥यौँ तपाईँ […]
वायुसेवा निगमको त्यो लगानी उड्यो, सिद्धियोअब जलसेवा निगम आयो, नउड्ने डुब्ने भित्रियो जता फक्र्यो झिलिमिली बिजु्ली, खानी नै खानी, तेलैतेल यतै एयरपोर्ट, उतै हेलिप्याड देशैभरि रेलैरेल सहर, गाउँ, जता जाऊँ, मेट्रैमेट्रो, ठेलमठेल घरघर ग्याँस, टोलटोल उद्योग, सर्प–बिच्छी–भ्यागुतो मेल तलब–भत्ता बढी–बढाउ छ, तक्मा–सम्मान बाढी भेल आयो मदारी मसान जगाई, काला जादु हेरौँ खेल ! पासफेल, जहाज–रेल […]
धुलोबाट पिचमा पुग्छ पुग्छ एक दिन छेउको मान्छे बीचमा पुग्छ पुग्छ एक दिन । कतिन्जेल रमाउला र पराजय पनि हारबाट जीतमा पुग्छ पुग्छ एक दिन । सङ्घर्षको बाटोलाई छिचोलिसकेपछिहेय पनि मितमा पुग्छ पुग्छ एक दिन ! आफैँ कस्छ लगाम यो नयाँ बिहानीले छाडाबाट रीतमा पुग्छ पुग्छ एक दिन !
रोयो आज आर्यघाट
नदीनाला मात्र होइन लिपुलेक, कालापानी पनि नक्सैमा राखिसके छिमेकीले हाम्रो भूमि । टेकेर मेरै देशको छाती छिमेकी लुट्दै छ अस्मिता हाम्रो कालापानी अहिले भैरहेछ रमिता । दुस्मन भगाऔँ हामी सबै नेपालीे मानव पर्खाल बनी टीका लगाऔँ माटोको दुस्मनको नाश गर्न भनी । सुस्ता, लिपु, महाकाली अनि कालापानी जुन ठाउँमा दुखे पनि हुने हुन् घाइते हाम्रै […]
हिजो दिनभरि सिमसिमे पानी पर्यो । चिसो निकै थियो । आज भने आकाश खुलेको छ । बिहानैदेखि न्यानो घाम लागेको छ । दिनभरि गर्नुपर्ने कामको सम्झनाले शरीर गलिसकेको छ । जतिसुकै थकान महसुस भए पनि निस्किनु नै छ सधैँझैँ गन्तव्यतिर । मन पटक्कै खुसी छैन, खै किन ? – बिसन्चो भएर हो कि ? आफँै […]
मेरो गाउँको पूर्वी छेउमा फेरि अर्को भट्टी खुलेछ । नयाँ भट्टी । यसको चर्चाले अहिले गाउँमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ । गाउँमा जो नयाँ आउँछ, ऊ मात्र नयाँ हुन्छ । बाँकी सबै गाउँका नै हुने भएकाले नयाँ कोही आयो भने केही दिनसम्म चिया पसल या चौतारीतिर त्यहीमात्र छलफलको विषय हुन्छ । केटी रहिछ भने कसकी […]
नकार ता वाहनाभित्र रै’छ स्वीकारको चाहनाभित्र रै’छ बुझ्नै नसक्ने नवनीतको कथा वहारको कल्पनाभित्र रै’छ भाषा अनौठो पनि बुझ्नुपर्ने सञ्चारको कामनाभित्र रै’छ पुग्ने नयाँ मार्ग घुमाउरो रे पियारको आर्तनाभित्र रै’छ ।
१. रङ एउटा पहेँलो पात झर्यो मैले सोधेँ – ‘किन झर्यौ ?’ उसले सहजताका साथ जवाफ दियो – ‘देख्दैनौ, म हरियोे छैन’ झसङ्ग भएँ म यो सम्झेर कतै म पनि पहेलिएको त छैन ? २. साँचो मलाई साँचो मन पर्छ यो नभए मेरो कोठाको ताल्चा खुल्दैन र, मेरो मनले भन्छ आफ्नो कोठाको ढोका आफैले फोड्नु […]